कक्षा बंक गर्न कोल्ड ड्रिंक्सबाट बनाइयो कोभिड ‘पोजेटिभ’ रिपोर्ट ! Bizshala -
कक्षा बंक गर्न कोल्ड ड्रिंक्सबाट बनाइयो कोभिड ‘पोजेटिभ’ रिपोर्ट !
काठमाण्डौ। कक्षा बंक गर्नुभएको छ ? सायद विद्यार्थी जीवनमा कुनै न कुनै दिन केही न केही कारण अवश्यक कक्षा बंक गर्नुभएकै होला।
पढ्न अल्छी लागेको बेला कक्षा बंक गर्न कुन उपाय अपनाउनुभयो ? ज्वारो आयो, कोही बिरामी परे वा कुनै अर्जेन्ट काम पर्यो भन्ने कारण देखाउनुभयो होला। सबैको कक्षा बंक गर्ने फरक–फरक शैली रहेको हुन्छ।
हालै बेलायतमा कक्षा बंक गर्न रचेको बहाना वा भनौँ शैली यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ।
बेलायतको लिभरपुल विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी हालको समसामयिक विषय अर्थात कोभिडको कारण देखाएर कक्षा बंक गरेको घटनाले अहिले सर्वत्र चर्चा पाइरहेको हो।अहिले कोभिड विश्वका सबै देशका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ। तर आफूलाई कोभिड नै नभई नक्कली रिपोर्ट देखाएर ती विद्यार्थीले कक्षा बंक गर्दै आएका थिए।
नक्कली रिपोर्ट बनाउनु त सामान्य कुरा होला। तर नक्कली रिपोर्ट तयार पार्न गरिएको जुक्ति भने अनौठो नै रहेको छ।
ती विद्यार्थीले नाक तथा मुखको स्वाब टेस्टको सट्टा कोल्ड ड्रिंक्सको प्रयोग गरी कोभिडको नक्कली पोजेटिभ रिपोर्ट देखाएको खुलेपछि हल्लीखल्ली नै मच्चिएको छ। कोल्ड ड्रिंक्सको प्रयोगबाट कोभिड पोजेटिभ रिपोर्ट आउँछ वा आउँदैन भन्ने विषयमा अहिले विश्वविद्यालयले अनुसन्धान थालेको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव : २० करोड बढी मानिस आफ्नो बासस्थान
काठमाण्डौ। विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्ममा...
तालिवानद्वारा अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपतिको घरबाट ठूलो
काठमाण्डौ। अफगानिस्तानमा सरकार चलाइरहेको तालिवान समूहले...
भियतनाममा अरुलाई कोरोना सारेको अभियोगमा एक व्यक्तिलाई ५ वर्ष
काठमाण्डौ । भियतनाममा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको नियम...
हामी हजारलाई छोटकरीमा 'T' नलेखी 'K' किन लेख्छौँ ? यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । के तपाइँले कहिले सोच्नुभएको छ किन हामी अंग्रेजीमा हजार...
जर्मनीमा पिज्जा डेलिभरी गर्दै अफगानिस्तानका एक पूर्वमन्त्री
काठमाण्डौ । अफगानिस्तानका एक पूर्वमन्त्री जर्मनीमा पिज्जा...
मित्र होइन दुस्मन थिए गुगलका मालिक, यसरी पायो विश्वले भरपर्दो
काठमाण्डौ । ब्रान्ड गुगलको चमत्कारिक सफलताको कथा क्याल�...
टेस्लाको स्वचालित कार चन्द्रमा देखेर भयो कन्फ्युज, धन्न
काठमाण्डौ । एलन मस्कको इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनी टेस्ला...
मेसीको पूरा भयो सपना, के इंग्ल्यान्डले ५५ वर्षपछि जित्ला
काठमाण्डौ । स्टार फुटबलर लियोनल मेसीको टिम अर्जेन्टिनाले...